DDRescue-GUI, kumberi kweiyo Ddrescue kununura chishandiso | Linux Vakapindwa muropa
ddrescue Ndicho kununura chishandiso chinova chikamu che GNU zvishandiso kurongedza kwenguva yakareba, uye kunyangwe kugona kwayo kuri pasina kupokana - sezvo yanga ichishandiswa nenhamba huru yemastros kwemakore akati wandei. Asi senge ese iwo anoshandiswa kubvira iyo GNU / Linux rairo yekuraira, kune avo vanosimbisa kuti inopa yakati wandei pakudzidza uye kana yaive ipfupi, zvimwe zvinogona kuwanikwa kubva kwazviri.
Zvakanaka, kune avo vanofunga seizvi, isu tinazvo Ddrescue-GUI, kumberi kweDdrescue yakanyorwa muPython 2 uye izvo zvinopa yakachena kwazvo uye nyore kushandisa interface, nekudaro ichiona kuti yakanakisa GNU inogona kushandiswa nenhamba yakakura kwazvo yevashandisi kutora ruzivo kubva kune avo madhiraivha akaomarara, tsvimbo dzeUSB, maCD, maDVD, nezvimwe.
Sezvatinoona mumufananidzo wepamusoro wepositi iyi, isu tinongofanirwa kuratidza sosi yekutyaira (mune ino kesi / dev / sda), iyo nzvimbo yeiyo faira refaira (kana tichida) nenzvimbo yekuenda, uyezve kudzvanya on 'Tanga' isu tagadzirira kutanga dzosa ruzivo rwune zvikamu zvakashata, nezvimwe. Ehezve, isu tinofanirwa kuziva kuti iyo nguva yekuita inogona kusiyana zvichienderana nezvinhu zvakasiyana senge saizi yediski redu kana kumhanya kwemidziyo yedu.
Tinogona kurodha pasi DDRescue-GUI kubva kune yayo webhusaiti, iyo yatinogovana pazasi, kana nekuwedzera iyo PPA kana tikashandisa Ubuntu, Linux mint kana zvigadzirwa.
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: hamishmb / myppa
sudo apt-tora kuisa ddrescue-gui
Website: DDRununura-GUI (Pad yekuvhura)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » DDRescue-GUI, pamberi peiyo Ddrescue yekununura chishandiso
BOSS, iyo inoshanda iyo India ichashandisa